Toavina Ralambomahay “Mila manana antoko vao mitondra firenena”
Marc Ravalomanana “Be loatra ny tsy mety sy ny alahelom-bahoaka…”
Nijery ifotony ny fanamboarana eny amin’ny Rova i Marc Ravalomanana omaly maraina ary nanao fandaharana manokana ny hariva.
Riribe “Ady angamba no tadiavin’ny fitondrana”
Tsy mitsipaka ny ady ataon’ny fanjakana amin’ny Covid 19 izahay, hoy ny kandida ho solombavambahoaka teo aloha sady solontenan’ny zanak’I Toamasina, Henry Rakotomalala na Riribe, omaly.
Vatovavy Fitovinany Hafanafana ny fiandrasana ny fizaram-paritra
Efa fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fampielezan-kevitra nataony ary efa nifampiresaha nivantana tamin'ireo Tangalamena sy Olobe taty an-toerana,
Jeneraly Richard Ravalomanana Takian’ireo depiote ny fanesorana azy
Nanao tatitra mahakasika ny asany nanoloana ireo solombavambahoaka ireo Tompon’andraikitra ambony ao amin’ny governemanta miantsoroka ny fandriampahalemana omaly.
Resaka Rova sy tsindrona amin’ny Covid 19 Miantso fifanatonana sy fifampidinihana ny CFM
Manana ny andraikiny voafaritry ny lalana ny filankevitry ny fampihavanana malagasy na CFM. Voafaritra ao amin’ny 2016 – 027 fa miandraikitra ny mba tsy hisian’ny korontana eto amin’ny firenena izahay, hoy ny filohany, Maka Alphonse.
« Ao anatin`ny efa-taona manaraka dia mila manokana vola mitentina 17,4 miliara dolara ny fanjakana Malagasy.
Hitady famatsiam-bola mitovy sora-bola amin`io vola io any amin`ireo mpiaramiombon`antoka indrindra amin`ireo tsy miankina », hoy Richard Randriamandranto, minisitry ny tetibola sy ny toebola. Manoloana io fanambarana io dia nitondra ny heviny i Toavina Ralambomahay, mpanolotsaina monisipaly. Fa angaha moa tsy vao avy nanatrika ny « Conférence des Bailleurs » ny filoha Rajaonarimampianina ka nisitraka vola amina miliara dolara maro ? Atoa Henri Rabarijohn, izay lasa governoran`ny banky foiben`i Madagasikara, dia nanatrika ny fihaonambe. Raha ny fieritreretako hatramin`izay, efa nahita famatsiam-bola ho an`ny IEM ny Filoha Rajoelina mialoha ny fifidianana filoham-pirenena. Mampatsiahy ny MAP, vinan`ny filoha Ravalomanana, tamin`ny taona 2007 izay tsy mbola nahitàna famatsiam-bola kanefa ny taona 2003 dia nisy ny « Conférence des Bailleurs » izay nisitrahana 4 miliara dolara. Fehiny, hoy izy, dia mila miomana sy manana antoko vao mitondra firenena. Fa tsy eo vao mitady vola, « cerveau », paikadim-pampandrosoana. Ny olana, hoy izy, dia ny Malagasy tsy mahavita miharitra ivelan’ny Fitondrana ka manangana antoko fa te hiditra. Noho izany, ny antoko Humaniste et Ecologiste sy ny KOMBA dia mitady olona mitovitovy hevitra mihitsy amin’izao, hoy hatrany ny fanazavana.